तपाईलाई थाहा छ ‘सोसल डिस्टेन्सिङ’को अवधारणा कहाँबाट आयो ? - Jhilko
तपाईलाई थाहा छ ‘सोसल डिस्टेन्सिङ’को अवधारणा कहाँबाट आयो ?
काठमाडौ । कोरोनाभाइरससँगै सोसल डिस्टेन्सिङको अवधारणा आएको होला भन्ने आम बुझाइ आफैमा गलत हुन सक्दैन ।
तर यो एक १४ वर्षीय बालिकाले स्कूलको विज्ञानसम्बन्धी प्रोजेक्ट पूरा गर्नका लागि बनाएको कम्प्युटरमा तयार गरिएको अवधारणा हो ।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस वा छोरा बुसको कार्यकालमा अहिले भन्दा १४ वर्ष अघि सन् २००६मा यसलाई ल्याइएको थियो ।
अमेरिकन इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स रिसर्चका सम्पादकीय निर्देशक जेफरी ए टकरले यो खुलासा गरेका हुन् ।
सोसल डिस्टेन्सिङको यो विचार विज्ञहरूको अवरोधको बाबजुत यसलाई अमेरिका भर कानुन बनाइएको उनले जनाएका छन् । अहिले यो विश्वभर कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
सोसल डिस्टेन्सिङसँग जोडेर हजारौं आलेख र दैनिकरूपमा प्रकाशन प्रसारण हुने मिडियामा विचार आउने अहिले स्वाभाविक बन्न पुगेको छ ।
तर कोरोनाभाइरस अघिका सरूवा रोगका लागि सन् १९६८÷६९, १९५७ , १९४९–१९५२ वा १९१८मा कतै लक डाउन गरिएको थिएन् । यो आतंकित गर्ने खालको विचार मार्च २०२०मा देखा प-यो ।
यो विचारले दुनियाँलाई नै जेल बनाइ दिएको भन्दै उनले ४० हजार अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष कमाउने मजदुरहरू मध्ये ४० प्रतिशतको रोजगार गुमाइ दिएको बताए ।
यो विचार कुनै महामारी विज्ञले अध्ययन गरी बनाएको नभइ कम्प्युटर मोडलमा आधारित भइ बनाइएको विचारलाई अंगीकारगरिएकोमा उनको आपत्ति छ ।
कयौं किताबका लेखक समेत रहेका जेफरी भन्छन् “ सोसल डिस्टेन्सिङको यो पदावली सन् २०११मा ‘कन्टाजियन’ सिनेमाबाट पहिलो पटक सुने । त्यसपछि न्यूयोर्क टाइम्पसले फेब्रुअरी १२, २००६मा यससम्बन्धी विषय छापेपछि थाहा पाए ।”
अहिले यसलाई नयाँ राजनीतिक भनाइका आधारमा ‘क्वारन्टीन’ पनि भन्न थालिएको छ । चराबाट निस्केको फ्लु सन् २००६मा आएको थियो । त्यतिखेरका अमेरिकी राष्ट्रपति छोरा बुसले पुस्तकालयमा सन् १९१८को फ्लुबारे पढेर त्यसबारे विज्ञहरूलाई केही उपाय र योजना प्रस्तुत गर्न भने ।
न्यूयोर्क टाइम्स अप्रिल २२, २०२०मा सोसल डिस्टेन्सिङको कथा लेखेको उनले जनाएका छन् । त्यस अनुसार १४ वर्ष अघि अमेरिकाको संघीय सरकारका दुई डाक्टरहरू रिचार्ड ह्याचेत र कार्टर मेचरले एक सहकर्मीसँग एक प्रस्तावबारे अन्तिम समिक्षा गर्न बसेका थिए ।
दुबैले मध्ययुगमा अमेरिकीहरू एकान्तवास वा सेल्फ आइसोलेसनमा जाने गरेको भनी आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रपति बुसले यो विचारलाई देशमा अर्को सरूवा महामारी आए त्यसको सुरक्षाका लागि उपयोग गर्ने भनी ल्याएको यो विचार हो । दुबै डाक्टर ह्वाइट हाउसका सल्लाहकार भए ।
रक्षा विभागको टोलीलाई पनि यस्तै काम गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । छ । यो टोलीले गरेको गहिरो अध्ययनमा द स्यान्डिया नेशनल ल्याब्रटरीमा काम गर्ने एक वैज्ञानिककी १४ वर्षीय छोरी लाउरा एम ग्लासले साइन्स प्रोजेक्टका लागि तयार पारेको विषय समेतको अध्ययन गरेको पाइयो । हालै ती बालिकासँग यसबारे सम्पर्क गर्न खोज्दा अन्तर्वार्ताका लागि इन्कार गरेकी छिन् ।
बिफर उन्मूलनका अन्तर्राष्ट्रिय अगुवाका रूपमा चिनिएका डाक्टर डीए हेन्डर्सन सोसल डिस्टेन्सिङको व्याख्यालाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको जेफरीको भनाइ छ ।
महामारी विज्ञहरूको सहभागीतामा निर्माण नगरिएको यो सोसल डिस्टेन्सिङको पहिलो पटक एचवनएनवन सन् २००९ फैलिदा अमेरिकामा पहिलो पटक प्रयोग गरियो।
जेफरीका अनुसार यो एक नयाँ रूढीवादी विचार हो जसले मेडिकल अध्ययन अनुसार बलियो वा नैतिकरूपमा सही ठ-याउँदैन् ।
आज शाह वंशीय राजतन्त्रलाई हटाएर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दिन
राष्ट्रपति भण्डारीबाट २३३ कैदीलाई माफी मिनाहा
पानी प्रयोगशालाको बाटर एम्बुलेन्स सेवा
आपत्कालीन अवस्थामा पानीको गुणस्तर नाप्नका लागि अत्याधुनिक उपकरण जडान भएको वाटर एम्बुलेन्स...
सागमा भिड्लान् भारत र पाकिस्तान ?
पाकिस्तान र भारतका खेलाडी एउटै खेलमा आमने समाने भिड्नु पर्ने स्थिती आए खेलाडीले...
अठाइस स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न बाँकी
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महीनाको अवधिमा कूल ७५३ स्थानीय...
देश विकास र सुरक्षाका निम्ति कडा कानून आवश्यकः गृहमन्त्री...
नेपाल कानून आयोगले ‘जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’बारे...